Icala laseRomy no-Savannah kusukela manje liyaqhubeka? : UMartin Vrijland
Ngezinto eziningi ezigxeka kakhulu noma lapho inkulumo esemthethweni ibuzwa khona, ubona ukuthi bayathulisa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Le mbono ifana nendlela ophazamisa ngayo ingane ekhala ngoba ifuna ukunakwa. Ubeka i-pacifier emlonyeni noma uyinike ithoyizi futhi ingane ithule futhi. Abezindaba bangabanikazi bezinkambiso zokuphazamisa lapho izinto zingahambi njengoba kuhlelwe kulo mshini. Khona-ke unakekelwa ukuphazamiseka nezinye izihloko. Ngenhlanhla, kwakukhona ukwesaba okwanele kanye nomdlalo wokwenza le ndaba ishabalale ngemuva. Ubani okhuluma ngoRomy no-Savannah?
Iskripthi e-Romy nase-Savannah icala (ngokulandelana ngakwesokudla nangesobunxele esithombeni) kubonakala sengathi liye lacabanga ukuthi abantu bazoqiniseka ukuthi into ebangelwa ukusebenzisana kwezokuxhumana nabantu abasha abasha. Le script yacabangela ukunakwa okuningi emphakathini jikelele, ngoba kwakungamantombazane e-2 ofanayo ubudala futhi kwenzeka endaweni engamakhilomitha angu-15, kodwa lesi script asizange sicabange ukuthi kwakukhona umcwaningi owenze lonke indaba. ukungabaza futhi ngaleyo ndlela ukunqotshwa kwabantu abaningi bakhathazekile (okungenani, kwakucatshangwa yi-trolls eyaziwa ngezenhlalo zenhlalo ekhishwa ekhasini le-Facebook likaMartin Vrijland). Iskripthi bekufanele sikhoxise emphakathini. Ukushaqeka kwakuyimpendulo oyifunayo kule maxim 'Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo"lapho iskripthi sisekelwe khona. Le nkinga yayiwukufa okubhekwe ukubulawa kwamantombazane e-2 kanye nalokho okushiwo ukuthi yenziwe abahlukunyezwa kubafana abancane be-2. Funda lesi script futhi kum isihloko esandulele.
Kukhona izinto ezimbalwa eziphawulekayo okukhulunywa ngazo kule ndaba. Okokuqala, umngcwabo wamantombazane wawubushelelezi kakhulu. Uma kwenzeka ukubulawa okufanayo endaweni engamakhilomitha angu-15, okungenani ukuxhumanisa kufanele kuthathwe ngokubhaliwe ngakho-ke izidumbu ezimbili ezitholakalayo kufanele ziphenywe yi-Netherlands Forensic Institute (i-NFI). Lokho kuthatha isikhashana. Okunye okunjalo kuthatha isikhathi. Ngenxa yalokho, kuzodingeka ulinde njengezihlobo ngaphambi kokungcwaba ingane yakho. Ngakho imingcwabo yenzeke ngokushesha.
Kwakuphawuleka nakakhulu ukuthi ngemuva kokucwaninga ngezindawo ezisolwayo, akukho mkhondo wokulimala etholakala kunoma yimuphi udonga lwamatongo. Ukuthola isisulu ngaphandle kwamanzi kuzohambisana nokucwaninga okudingekayo kulowo manzi. Kwami isihloko esandulele uzothola ividiyo bese ngichaza ukuthi kwakungekho ndawo emlandweni womonakalo emgodini. Umbuzo ongazibuza wona umbuzo wokuthi ngabe izidumbu zitholakale yini noma ngabe sekukhona isenzo kanye nokudubula kwezithombe ezinye izindaba-abasebenzi be-psycho abakhona. Ukulandelela ucwaningo nokususwa komzimba akunakwenziwa ngaphandle kokwenza umonakalo, ngaphandle uma uvumela itampu ukuba ifike (kodwa lokho kushiya amathrekhi). Umbuzo engiwubuzayo (nokuthi yikuphi abantu abangathola ukuthi nabo bayesaba ukucabangela) ngu: "Ingabe u-Romy no-Savannah bafile? baye babulawa? (ngakho-ke) ziye zafunyanwa?"
"Ungayifaka kanjani lokho ngokukhululekile? Kunabantu abasolwa nge-2, okuyi-1 eyake yamemezela! Kuyinto ecacile!"Yebo, ngiphakamisa ukuthi ngoba kufanele senze ngezindaba zabezindaba. Esigabeni sami sangaphambilini ngashicilele amagama abenzi bokuthi abasolwa. Futhi qagela ukuthi yini! Ngangingenayo impendulo ye-1 kumuntu owabazi abafana. Azikho izinkabi noma izintombi, akekho abazali abathi kufanele ngisuse amagama. Akulona yini iqiniso ukuthi u-AD.nl washicilela ukuthi abazali bomsolwa wokubulala u-Savannah babefake isikhalazo kumuntu owashicilela igama lendodana yabo? Kungani abazali balo mfana abazange bathathe inkathazo ukususa amaphrofayli akhe? Ungabuyi indaba yokuthi abazange bakwazi ukufinyelela kula maphrofayela. Lokhu kuhlelwe uma ufaka ummeli kulo futhi ungafakazela ukuthi kuphathelene nendodana yakho. Ingabe laba bantu bakhona ngempela? Konke esikuzwayo yizindaba ezindabeni nasezindaba mayelana nabantu abathi bazi abafana. Nami ngifikile emagameni abafana, kodwa ukudalulwa kwalowo lwazi kungahle kulawulwe ngokucophelela, ngoba lesi script sasiphazamiseka kakhulu umuntu obabuza inkulumo esemthethweni. Ukudalulwa kwala magama kuye kwaba yilapho kuphela ngitshelwe ukuthi abantu babengazi ukuthi abenzi bokuhlukumeza. Ngemva kokushicilelwa, angizange ngizwe noma ngubani othi bayazi abafana. Izindaba kuphela ezokuxhumana zinikeza umbono wokuthi abafana babe nabangane ngakho-ke babekhona.
Ngamangala ukuthi kuleli sonto ngithole i-imeyili evela eqenjini lomthetho uSZ Advocaten waseGageningen, egameni likaMnu SS Zijderveld:
Kungani ngishicilela le imeyili? Ngabe ngizibuza ukuthi kungani lo mmeli engazange afake isikhalazo ngokumelene nami mayelana nokuhlukunyezwa? Abazali balo mfana babeyokwenza lokho ngaphambili? Ngiyicaphuna AD ka-14 Juni [ukucaphuna] Abazali bomfana oboshiwe mayelana nokufa kwentombazane uSanannah baye benza isimemezelo sokuqothula. Omunye uthumele isithombe sendodana yabo ku-Facebook ngempelasonto eledlule esho ukuthi ungumbulali we-Savannah. Nakuba isithombe sasuswa maduzane ngemuva kwalokho, abazali bakhetha ukufaka umbiko. "Bafuna ukunikeza isignali. Nabo banelungelo lobumfihlo, "kusho ummeli wabo. Abazali bakholelwa ukuthi kungukuthi ijaji lihlulele indodana yabo hhayi imibono yomphakathi. Kungani ngithola kuphela i-imeyili ethi ngiyaphula ubumfihlo? Futhi kungani uNksz Zijderveld engakhulumi igama lomsolwa ku-imeyili yakhe? Angeke yini enze iphutha elingokomthetho ngokubiza igama lomuntu ongenakho? Ingabe ukuvuza kwephrofayli yezokuxhumana yomphakathi walo msoli (Angelo), mhlawumbe ingxenye yeskripthi yokwenza indaba yomenzi wobugebengu ikholwe? Kungani bengingenandaba nokuphendula kwami ​​kuMnuz Zijderveld? Kungani izithombe nezithombe zokuxhumana zomphakathi zalesi sikhumbuzo zisasebenza ku-intanethi? futhi ngemuva kwesimemezelo sokusola sabazali? Ingabe abazali baka-Angelo babengewona ababika ukuhlambalaza ngokwe-AD? Ingabe i-Angelo ayiyona encane? Akufanele yini athole isabelo kubazali?
Lokho esikubonayo ukuthi abezindaba bezenhlalakahle badlala indima ebalulekile ekuthintaneni phakathi kwabasolwa nabasolwa. Kungenzeka yini ukuthi singasuswa ngokuphelele nge-script yefilimu njengento yangempela yokuphila? Kuyavunywa, lokho kuyisenzo se-macabre. Ubani ozenza sengathi amantombazane e-2 abulawe futhi abafana abancane be-2 kungenzeka babe ngabahlukumezi futhi bebeka yonke iNetherlands ibe yisibindi ngokusebenza? Ubani manje obeka imingcwabo ye-2 engozini? Lokho akunakwenzeka! Uma nje indaba ihlala indaba futhi kufanele sikwenze ngaphandle kobufakazi, singasho ukuthi lokhu kungenzeka. Uke wabona abazali abadabukile esithombeni? Kungani umama kaRomy angithumelela ikhadi lakhe le-ID ngosuku lomngcwabo kaRomy futhi kungani ikhadi le-ID likaRomy ngokwalo lihamba ngosuku olulandelayo? Ngaphakathi lesi sihloko Ngichaza isizathu nokuphendula okuqhubekayo. Ungase ucabange ukuthi, njengomama, unokunye okucabangayo ngesikhathi somngcwabo, bese uthumela i-imeyili ngo-Martin Vrijland. Ingabe kufanele enze le ndaba ibe yithembekile, ukuze ngingeke ngibheke phambili?
Eziqephu zami zangaphambilini ngivele ngithumele isimo esingenzeka esingasetshenziswa njengeskripthi:
Kungani bezokwenza / benze into enjalo? Ukuze ufinyelele imigomo emikhulu ngomthelela omkhulu wezenhlalakahle nokulawulwa okungaphezu kwesibalo sabantu, ungabamba abantu ngobuqili nokukhohlisa, ngokusho kwencwadi kaNiccolo Machiavelli ethi 'Il Principe'. Futhi kulowo maMavavavelli umklomelo obaluleke kunawo wonke wezindaba eNetherlands ubizwa ngokuthi. Ngesikhathi uBauke Vaatstra wathola lowo mklomelo.
Esikhathini eside sizobe sibone izindaba ezengeziwe eziqinisekisa ukufunda okusemthethweni. Kodwa okokuqala isihloko sizophrinta kuze kube khona. Khona-ke cishe kuzoba nemibiko yezindaba ethi abasolwa "baboniswe" abahlukumeza (ngaphandle kokufakazela noma ukufakazela lobufakazi noma kuphi). Ekuchazeni 'amaqiniso okubulala', ukuxhumana nomphakathi wezenhlalo kungenzeka kube yinto ebalulekile. Ngakho-ke singalindela isiphakamiso somthetho sokuza nokulawulwa okungaphezulu kwezokuxhumana; Izingane zingahle zibeke ngaphansi kokuqondisa kanye neziphakamiso ezingokomthetho ngisho nangaphezulu kwalolu hlobo. Ngamafuphi, kuphinde kube nenkinga; ukusabela kungukuthi (noma kunalokho kufanele kube) 'ama-horror phakathi kwabantu' (ngokunambitheka komqondo wokuthi abezindaba bezenhlalo kuyingozi enkulu) futhi isixazululo singatholakala eminye iminyango yombuso wamaphoyisa. Ukuphazamiseka okungaphezulu kukahulumeni; ukuphulwa okungaphezulu kobumfihlo bezakhamizi ngulo hulumeni.
Kuningi okuningi ongayisho ngale ndaba. Isibonelo, kwakukhona ukubandakanyeka kwezokuxhumana komphakathi wesiphathimandla samaphoyisa eHoevelaken. Lo mbutho wesifunda ogama lakhe lingu-Erik Kluinhaar, wangitshela ngecala lokuhlambalaza nokunyundela ezihlokweni ezishicilelwe yimi (bheka lapha). Embuzweni wami ukuthi kungani kungekho namemezelo ngokumelene nami nesicelo sami sokuchaza (bheka lapha) Angizange ngisabele. Futhi isikhalazo esisemthethweni ngokumelene nale agent (bheka lapha), akakavelanga impendulo. Ngakho-ke ummeli angase abize nje emithonjeni yezenhlalo engizenzayo inhlamba nokunyundela, ngaphandle kokufakazela noma ubufakazi. Eqinisweni, wonke amawebhusayithi azinikezele ekukhokheni okungekho emthethweni nokunyundela ekhelini lami. Ukuhambisa isikhalazo noma ukufaka isikhalazo kuholela ekuphenduleni okuvela emaphoyiseni nakwezomthetho. Kusukela uhulumeni (yebo, ngoba ukuhlambalaza nokunyundela efakazelwe inthanethi livela ukuthi ekhoneni phezu isimo isisebenzi Jeroen High Weij) may ke ukuhlambalaza linesisekelo nokunyundela ngokumelene umuntu wami uzibophezele lutho ngezikhalazo noma uyabuya. Akukhona nje impendulo. Kubonakala sengathi leli qhinga elilodwa elishiye ukuvimbela zonke izinhlobo zokugxekwa emphakathini ligcwele indlela: 'Bulala isithunywa'noma: ukuthulisa umlobi uMartin Vrijland ngokusebenzisa ezokuxhumana nabantu kanye namawebhusayithi.
Kuyacaca ukuthi kubantu abaningi lapho kukhona namanje imibuzo eminingi ngale ndaba evela eRomy nase Savannah. Kusuka ku-poll (bheka ngezansi lesi sihloko) phakathi kwabafundi be-750 kubonisa ukuthi i-12% embi ikholelwa ukuthi ukubulawa kukaRomy no-Savannah akuhlangene nomunye nomunye. Le-88% ayikholelwa ekufundeni okusemthethweni kwamaphoyisa kanye nabezindaba. Ingabe imfundiso kaMacavavelli isetshenziswa kuleli zwe? Ingabe umklomelo wamaMacavelli uzoya kulowo mame kumamorobha aseHovelavelaken noBunschoten noma umqondisi weJH Donnerschool eDe Glind?
Ngesikhathi esifanele, abukho ubufakazi obuhlinzekelwe kokubili kokubulala kanye nabasolwa. Senza ngezindaba nezithombe. I-Hollywood ingakwenza lokhu; abezindaba bangenza lokhu. Ubufakazi bungadalwa futhi ukuze kuqinisekiswe umphakathi jikelele. Ngicaphuna umfundi ku-Facebook [ukucaphuna] Buka uchungechunge lwe-docu oluhle kakhulu ku-Netflix ngokwenza umbulali! Weird indlela enkantolo, inhlama ubufakazi inkohliso, abasolwa zicindezelwa ukuphoqelela nezimemezelo yokuphepha iminyaka elingenacala, ephoqa amaphoyisa ukuba aqambe amanga njalo njalo. Akekho ongathembeka, noma ngabe asebenzela ubulungiswa. Ungakha ubufakazi ukwenza udaba lwakho luthembeke. Isibonelo, kungabikwa nje emithonjeni ukuthi ukusekelwa kwatholakala emzimbeni wamantombazane. Ngakho-ke, ungasho, isibonelo, ukuthi i-DNA yabasolwa itholakala emzimbeni wamantombazane. Ubani ongakuhlola emva kwakho konke? I-NFI? Kulokho esinakho kule Icala lika-Anass Aouragh ku-2013, kucacile ukuthi le nhlangano ayithembekile ngokuphelele. Iphunga le-cover-up isalokhu lilenga kulolu cala. Lokho kuzobe kusekhona okufanayo nakuRomy no-Savannah.
Ukubulawa okubi kukaRomy Nieuwburg no-Savannah Dekker
Kungani 'ukucabanga ngendlela ehlukile' kuholela ekwenqatsheni kanye nocabango ukucabanga njengokubhekwa njengengozi
Amathegi: isimemezelo, advocaat, agent, Bunschoten, abahlukumezi, Erik Kluinhaar, afakiwe, I-Hoevelaken, ukunyundela, ukubulala, ababulali, abazali, URomy no-Savannah, Romy Nieuwburg, Savannah Dekker, amahloni, umsolwa, abasolwa, ummeli womakhelwane
23 Juni 2017 ku-18: 05
Lokhu cishe akusho ngawe uMartin. Ubani le ndoda?
23 Juni 2017 ku-18: 39
Hilarious! Futhi amaphoyisa afunde isifundo kakhulu !!
@Ikbenwakker, ngicabanga ukuthi uyaqonda ukuthi lena yizindaba ezimbi.
23 Juni 2017 ku-19: 16
Cha, akukho ukushushiswa ngoba mhlawumbe i-psyopp spoof:
24 Juni 2017 ku-05: 38
[Quote] "Abazali bomsolwa oneminyaka engu-16 benza umbiko, kodwa abazange bafake isikhalazo esisemthethweni. Ngakho-ke uMshushisi Kahulumeni uthi kumele kudedelwe icala. "
Isibonelo: "Sawubona, ngizokubika, kodwa ungafaki isikhalazo esisemthethweni". Ngakho ufaka isimemezelo, kodwa khuluma ngokuqondile ukuthi awufaki isikhalazo esisemthethweni. Kungani ubeka ibuyisela intela? Nokho, lokho kufana [quote]: "Ngokusho umphakathi ikakhulukazi abazali bafuna ukunikeza isignali ezingeke nje ukubeka konke kwi-inthanethi." Babefuna ukuthumela kuwuphawu lokuthi abantu hhayi nje ukugxila zokuxhumana. Yeka ukuzwelana!
Akukhona yini inkinga kanye nesisombululo ngokufihliwe ngasese?
Yiqiniso, njengabazali awukwazi ukwenza isimemezelo uma ungewona abazali bangempela bomuntu ongekho (noma umuntu okhona onobuqili obunamanga).
23 Juni 2017 ku-18: 09
« Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo: 'UBrussels manje uhambela ibutho emigwaqeni', iNhloko ye-NRC
Uhulumeni kanye nabezindaba bangasebenzisa isisindo nokukhohlisa futhi bavuze lokhu ngomklomelo wamaMacavelli »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.972.521